ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Air နှင့်ယိုစီးမှုထောင်ချောက် မှအရည်အသွေးမြင့် Air နှင့်ယိုစီးမှုထောင်ချောက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်အထူးပြုကျနော်တို့ Air နှင့်ယိုစီးမှုထောင်ချောက် in Taiwan။ ကျနော်တို့ကုန်စည်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပေါ်အခိုင်အမာဆိုကြသည်ဖောက်သည်အပ်ရဦးမည်, ဒါကြောင့်သူတို့စျေးကွက်အတွက်နာမည်ကောင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဘိုးနှင့်ဈေးကွက်တွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ R & D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းမှာ OEM သို့မဟုတ်နှစ်ဖွဲ့ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ကြ၏။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သင်တို့နှင့်အတူအအောင်မြင်ရန်ကျွန်တော်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပိုမိုမော်ဒယ်များကျေးဇူးပြုပြီးချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
ပုံစံ - ALL STAINLESS STEEL No. 11LD
DSC အားလုံးသံမဏိ float အမျိုးအစား TYPE အရည်ယိုစီးမှု
●DSC FLOAT TYPE AIR TRAP သည် TANK အောက်မှပိုက်နှင့်ပိုက်လိုင်း၏နိမ့်ဆုံးမှ စ၍ CONDENSATE သို့မဟုတ်အရည်ကိုစွန့်ပစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။.
●တစ်ချိန်က CONDENSATE AIR TRAP သို့ပြောင်းရွှေ့သည်,ထိုအခါဖိအားပေးလေကြောင်းစနစ်မှ CONDENSATE ကိုစွန့်ပစ်ရန်ထိုင်ခုံနှင့်အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်.CONDENSATE စွန့်ပစ်ပြီးနောက်,ရေနှင့်ထိုင်ခုံအကြားရှိကျန်ရှိနေသေးသောရေတံဆိပ်ရှိပါတယ်,အဆို့ရှင်.လေမရှူရ.
●INTEGRAL STRAINER ဖြင့် ၀ င်ပါ။ အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုပေးသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/air-and-drain-traps.html